လက်သန့်ရှင်းရေးသက်တမ်းကုန်ဆုံးပါသလား အသုံးပြုရန်လုံခြုံမှုရှိမရှိမည်သို့သိနိုင်သနည်း - ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ | ဇွန်လ 2022
ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ဆီးဂိမ်း ကုန်ပစ္စည်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီ, သတင်း ပြင်းထန်သောအားကစား ကျန်းမာရေးပညာရေး သတင်း၊ ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ကုမ္ပဏီသတင်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း
အဓိက >> ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ >> လက်သန့်ရှင်းရေးသက်တမ်းကုန်ဆုံးပါသလား
သင်အအေးနှင့်ပတ်သက်။ စိုးရိမ်ပူပန်နေခြင်းရှိမရှိ တုပ်ကွေးရာသီ သို့မဟုတ်မကြာသေးမီကကပ်ရောဂါ coronavirus ရောဂါ 2019 (COVID-19) သင်၏လက်ကိုဆေးခြင်းသည်ပိုးမွှားများကိုကာကွယ်ရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းဖြစ်သည်၊ ဆပ်ပြာနှင့်ရေမရရှိနိုင်ပါကသင်၏မိသားစုကိုလုံခြုံစိတ်ချစေရန်အတွက်လက်သန့်ရှင်းရေးသည်နောက်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး၏အကောင်းဆုံးပုံစံဖြစ်သည်။ သို့သော် Purell အဟောင်းသည်ရေချိုးခန်းနစ်မြုပ်နေစဉ်လှည့်ပတ်နေခြင်းသည်သန့်ရှင်းရေးအတွက်လုံလောက်သောအစွမ်းရှိသေးသလား။ ဒါမှမဟုတ်အသစ်စက်စက်ပုလင်းတွေကိုကပ်ထားသင့်သလား။
အတိုချုပ်အဖြေမှာ - ဟုတ်ကဲ့၊ လက်သန့်ရှင်းဆေးသက်တမ်းကုန်သွားပြီ။ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်နေ့ကိုသင်တံဆိပ်ပေါ်တွင်တွေ့ရှိရမည်သို့မဟုတ်ကွန်တိန်နာ၏အောက်ခြေတွင်ဖော်ပြထားသည်။ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသည်ဆေးနှင့်ဆိုင်သောပိုးသတ်ဆေးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်သန့်ရှင်းဆေးဖြစ်သည် စည်းမျဉ်း ယူအက်စ်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန (FDA) မှထုတ်ပြန်ထားသည့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်ကိုသုံးရန် (သို့) သုံးနှစ်သက်တမ်းရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဆိုလိုသည် မနိုင် သင်၏လက်ဆေးအညစ်အကြေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက်ကိုရှာပါ၊ ၎င်းကိုသင် ၀ ယ်ပြီးနောက်သုံးနှစ်ခန့်တွင်ကုန်ဆုံးမည်ဟုသင်ယူဆသင့်သည်။
အဘယ်အရာကလက်သန့်ရှင်းဆေးသက်တမ်းကုန်ဆုံးစေသနည်း။ ကော်လက်ရာဒို၊ မိသားစုဆေးပညာဆရာဝန်နှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုပညာရှင်ရောဘတ်ဝီလျံ (MD)၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံပေးတစ် ဦး ကရှင်းပြသည်။ eMediHealth ။
ဒေါက်တာဝီလျံကဆိုထားသည်သန့်ရှင်းဆေး၏ antibacterial agent ပမာဏသည် ၉၅% အောက်တွင်လျော့နည်းသွားသောအခါသက်တမ်းကုန်သွားသည်ဟုသတ်မှတ်သည်။
လက်သန့်ရှင်းဆေးကိုပုံမှန်အားဖြင့်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲနိုင်သည်။ FDA သည်လတ်တလောတွင် ethyl alcohol (အများဆုံးအဖြစ်များသည့်) နှင့် isopropyl အရက်ကိုအရက်အခြေပြုသန့်စင်ဆေးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ benzalkonium chloride ကိုအရက်မဟုတ်သောအခြေခံအညစ်အကြေးအဖြစ်ပြန်လည်ရောင်းချရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၆၀% မှ ၉၅% အကြားရှိသောအညစ်အကြေးများဆေးကြောသန့်စင်သူများအားအထိရောက်ဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုအရက်အားလုံးသည်သင်၏လက်များကိုအကြိမ်ကြိမ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ခြောက်သွေ့စေနိုင်သည် (ထို့ကြောင့်အစိုဓာတ်ထိန်းရန်မမေ့ပါနှင့်) ။ အရက်မဟုတ်သောအခြေပြုသန့်စင်ဆေးများသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၄ င်းတို့၏တက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ် benzalkonium chloride ပါဝင်သည်။ ဤလက်လက်သန့်ရှင်းဆေးအမျိုးအစားများသည်အလုပ်လုပ်ပြီးအရေပြားပေါ်တွင်နူးညံ့သိမ်မွေ့သော်လည်းများသောအားဖြင့်အရက်အခြေပြုသန့်စင်ဆေးများကဲ့သို့ထိရောက်မှုမရှိပါ။
လက်ဆေးသန့်ရှင်းရေးသည်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်အင်အားနည်းသော်လည်းပိုးမွှားအချို့ကိုသေစေနိုင်သည်။ ဒေါက်တာဝီလျံ (Dr. Williams) က၎င်းသည်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် အချိန်မှစ၍ အသုံးပြုရန်လုံးဝလုံခြုံသော်လည်း၎င်းသည်ပိုးမွှားအသစ်များကိုဖယ်ထုတ်ရာတွင်ထိရောက်မှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
SingleCare ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်သော Pharm.D မှ Kristi C. Torres ကအသစ်တစ်ခုကို ၀ ယ်ရန်သင်၏ဟောင်းနွမ်းနေသောသို့မဟုတ်သက်တမ်းကုန်သွားပြီဖြစ်သောလက်သန့်ဆေးပုလင်းကိုလွှင့်ပစ်ရန်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုပါက၎င်းကိုလုံခြုံစွာလုပ်ခြင်းသေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။ Austin, Texas မှဖြစ်သည်။
ဖျားနာမှုတိုက်ဖျက်ရေးတွင်လက်ဆေးခြင်းသည်သင်၏ပထမဆုံးကာကွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်သင့်ကြောင်းဒေါက်တာဝီလျံကပြောကြားသည်။ ဤရွေ့ကား အနာ အစာအိမ် bug များနှင့်ကပ်ပါးကောင်များပါဝင်နိုင်သည် Clostridium difficile , cryptosporidium နှင့် norovirus ။ ပျော်ရွှင်စရာအချက် - အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်ဖြစ်သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်ဆေးခြင်းနေ့ !
လက်များကိုဆပ်ပြာနှင့်ရေဆေးခြင်းဖြင့်အမြဲတမ်းလက်များပေါ်ရှိပိုးမွှားများလျှော့ချရန်အတွက်အမြဲတမ်းလိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်ဟုသူကဆိုသည်။ The ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစင်တာများ (CDC) သင့်လျော်သောလက်ဖြင့်ငါးဆင့်ချဉ်းကပ်မှုကိုသဘောတူခြင်းနှင့်အကြံပြုသည်
မသန့်ရှင်းမီသင်၏လက်များကိုရေစိုစေရန်သန့်ရှင်းသောရေ ((နွေးသို့မဟုတ်အအေးဖြစ်နိုင်) ကိုသုံးပါ။
လက်ဖြင့်သင့်လက်သည်း၊ လက်သည်းများ၊ လက်ချောင်းများအကြားပါဝင်ပါ။
အနည်းဆုံးစက္ကန့် ၂၀ ခန့်ပွတ်တိုက်ပါ။ သို့မဟုတ် Happy Birthday သီချင်းကိုနှစ်ကြိမ်သီချင်းဆိုခြင်းနှင့်ညီမျှသည်။
အကယ်၍ သင်၏လက်များကိုမဆေးနိုင်ပါကလက်သန့်ရှင်းဆေးသည်တန်ဖိုးရှိသောအစားထိုးပိုးသတ်ဆေးဖြစ်လာသည့်အခါဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံး ၆၀% ပါဝင်သောအရက်အခြေပြုအညစ်အကြေးစွန့်ဆေးဆေးကိုရွေးချယ်ပါ (သင်တံဆိပ်ပေါ်တွင်စစ်ဆေးနိုင်သည်) ။ အာရုံစူးစိုက်မှု 60% အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလျှင် ၎င်းသည်များစွာသောပိုးမွှားများကိုမသတ်ဖြတ်နိုင်သကဲ့သို့၊ ၎င်းတို့အားဖယ်ရှားပစ်မည့်အစားရောဂါပိုးများကြီးထွားမှုကိုနှေးကွေးစေနိုင်သည်။ CDC ၏အဆိုအရလက်ဆေးခြင်းကဲ့သို့လက်သန့်ရှင်းရေးဆေးကိုအသုံးပြုရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းရှိကြောင်း:
သင်၏လက်များကိုပွတ်ပေးပါ။ မျက်နှာပြင်တိုင်းကိုဖုံးအုပ်ထားပါ။ (နောက်ကျောကိုမမေ့ပါနှင့်!) ဂျယ်လ်သည်ခြောက်သွေ့သည်အထိ။ ဒါကစက္ကန့် ၂၀ လောက်ကြာလိမ့်မယ်။
သင်၏လက်တွင်မြင်နိုင်သောအညစ်အကြေးများသို့မဟုတ်အညစ်အကြေးများရှိပါက (ဥပမာ - ပိုးသတ်ဆေးကဲ့သို့) အန္တရာယ်ရှိသောဓာတုပစ္စည်းများနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိပါက၎င်းတို့ကိုဆပ်ပြာနှင့်ရေဖြင့်သန့်စင်ရန်လိုလိမ့်မည်။ ။
မည်သည့်နာမကျန်းမှုမဆိုပျံ့နှံ့ခြင်းမှသင့်အားလုံးလုံးလျားလျားလုံခြုံမှုရှိစေရန်လက်ဆေးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အာမခံချက်မရှိပါ - ၎င်းတို့သည်အဏုဇီဝပိုးမွှားအမျိုးမျိုးကိုမဖယ်ရှားနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့ကိုလျှော့ချရာတွင်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းဒေါက်တာဝီလျံကပြောကြားသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏လက်များကိုသန့်ရှင်းအောင်ထားပါ၊ ဆပ်ပြာနှင့်ရေဖြင့်ဆေးကြောခြင်း၊ အရာဝတ္ထုများကိုထိခြင်းဖြင့်သင်အဆက်အသွယ်လုပ်သောပိုးမွှားများကိုလျှော့ချရန်အဆင်သင့်အနေအထားတွင်လက်သန့်စင်ဆေးဘူးတစ်ဘူးကိုအမြဲထားသင့်သည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လတွင် FDA သည်သုံးစွဲသူများအားမက်သနောဓာတ်ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်ကိုသတိပေးခဲ့သည်။ Methanol (သို့) သစ်သားအရက်သည်အရေပြားမှတဆင့်စုပ်ယူသောအခါ၊ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အစာကိုစားသောအခါအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ လက်တလောပြisနာမှာလက်သန့်ရှင်းဆေးထုတ်ကုန်များသည်အီသနော (ethanol) သို့မဟုတ်ပါ ၀ င်သည့်အီသနောအရောများပါ ၀ င်ရန်တံဆိပ်တပ်ထားသော်လည်းမက်သနောလ်ညစ်ညမ်းမှုအတွက်အပြုသဘောဆောင်သောစမ်းသပ်မှုများဖြစ်သည်။
Methanol သည်လက်သန့်ရှင်းရေးအတွက်လက်သင့်ခံနိုင်သောပစ္စည်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ FDA အနေဖြင့်လည်းဒီကိစ္စကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။ Eskbiochem, 4E Global's Blumen, Real Clean ကဲ့သို့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်ထုတ်ကုန်များကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းထားသောလက်သန့်ရှင်းရေးဆေးများ၏နောက်ဆုံးစာရင်းကိုကြည့်ရန် FDA ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ကြည့်ပါ up-to-date ဖြစ်အောင်သတင်းအချက်အလက်သည်။
ပါဝင်သောပစ္စည်းများနှင့်သိသိသာသာထိတွေ့ခြင်းသည်ပျို့ချင်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အမြင်အာရုံမှုန်ဝါးခြင်း၊ အမြဲတမ်းမျက်စိကွယ်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း၊ မေ့မြောခြင်း၊ အာရုံကြောစနစ်ကိုပျက်စီးစေခြင်းသို့မဟုတ်သေစေနိုင်သည်။ လက်ကိုသန့်ရှင်းဆေးပေးသူမှတစ်ဆင့်မက်သနောကိုထိတွေ့သည်ဟုသင်ထင်လျှင်အဆိပ်ကိုချက်ချင်းကုသသင့်သည်။ အဆိပ်ထိန်းချုပ်ရေးတယ်လီဖုန်းကို 1-800-222-1222 သို့ဆက်သွယ်နိုင်သည် အွန်လိုင်း ။
B.K.S. Iyengar: သင်သိရန်လိုအပ်သောအမြန်အချက် ၅ ချက်
Gladys Knight ၏ကျန်းမာရေး၊ သင်သိရန်လိုသောအချက် ၅ ချက်
activated charcoal ကိုယူရန်အကောင်းဆုံးအချိန်သည်ဘယ်အချိန်လဲ
ဆီးချိုမရှိသောသူများအတွက်ပုံမှန် a1c ကဘာလဲ